မိခင်နှင့် အခွင့်အရေး – How She Did It
BlogCareer-loving WomenWomen Entrepreneurship |
ကျွန်မ အလုပ်စလုပ်ခါစ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကတည်းက လူကြီးသူမတွေအများစုက “အခွင့်အရေးဆိုတာ နှစ်ခါမလာဘူး” ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားဖို့၊ အမြဲတက်ကြွနေဖို့၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတွေ့ရင် လက်မနှေးဖို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ကြတယ်။ ဒီစကားကြောင့် ကျွန်မဘဝမှာ တက်လမ်းတွေအများကြီးပွင့်ခဲ့တယ်။ ဒီစကားကြောင့်လဲ သွက်လပ်တဲ့တွေးခေါ်မှုတွေ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေရလာတယ်။ ဒီစကားကိုလက်ကိုင်ထားလို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်တတ်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီစကားက ကိုယ်နဲ့မကိုက်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်မအမြဲပြောဖူးတာလေးရှိတယ် – working woman နဲ့ working mother က ရေနဲ့ဆီလိုကွာခြားတယ်။ လူငယ်လူလွတ်ဘဝမှာတုန်းက အလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်တယ်၊ အလုပ်ပြီးရင် ညစာစားပွဲလည်းတက်နိုင်တယ်၊ စနေတနင်္ဂနွေ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုရင် လုပ်နိုင်တယ်။ ခရီးထွက်ဆိုရင်လည်း နီးတာဝေးတာကိစ္စမရှိဘူး အိပ်ကလေးထုပ်ပိုးပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထွက်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအရွယ်မှာ အဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ့်အတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ၊ လူမှုစက်ဝိုင်းအသစ်တွေ၊ ဗဟုသုတအသစ်တွေ၊ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကို ရလာနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်လိုခံယူချက်နဲ့ ရတဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းကို လက်ခံလို့မရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုတူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ မပေးတော့တာလည်း ကြုံရတယ်။ ဒါကို လူတွေက “ဟိုင်းသွားပြီ” လို့ခေါ်ကြတာ ကြားဖူးတယ်။
ကျွန်မအထင်တော့ “ဟိုင်းသွားပြီ” ဆိုတာ –
၁) အရင်လိုပေါများတဲ့အချိန်နဲ့ ဘယ်တော့မှမပင်ပန်းနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစား တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာ။
ကလေးငယ်လေးတွေရှိတဲ့ မိခင်ဘဝဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ဆုံးအချိန်ပါ။ အချိန်အားဖြင့်လဲ သူတို့လေးတွေကို အဓိကထား ဦးစားပေးရတယ်၊ ကိုယ့်အလုပ်တွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်သွားလာနေထိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ညှိနှိုင်းလုပ်ရတယ်။ “ကလေးလက်လွတ်လို့ရပြီဆိုရင် …” ဆိုတဲ့စကားဟာ ဖခင်တွေထက် မိခင်တွေက အသုံးပြုတာအများဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒီလို အရမ်းရှားပါးတဲ့ အချိန်/လူနဲ့စိတ် အင်အားတွေကို အသုံးချရမယ်ဆိုတဲ့အခါ အရင်လိုမဖြုန်းချင်တော့ဘူး။ ကလေးသိပ်ပြီးတာနဲ့ စာဖတ်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးလုပ်တယ်။ ကလေးရဲ့ဖေဖေအလုပ်နားတဲ့ရက် မေမေသင်တန်းတက်တယ်။ ရေအရမ်းရှားတဲ့အခါ ရေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးမပြုတော့သလိုပေါ့။ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်း နှစ်ခါသုံးခါပြန်စဉ်းစားပြီးမှ အသုံးပြုသင့်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတယ်။ ဒါတွေဟာ “ကလေးတစ်ဖက်နဲ့…” ဆိုတဲ့ မိခင်တွေအတွက် တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှု၊ ဦးတည်ချက်ရှိမှု တွေကိုရအောင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။
၂) အရင်လို “အခွင့်အရေးဆိုတာ နှစ်ခါမလာဘူး” ဆိုတာထက် “အခွင့်အရေးဆိုတာ အရည်အချင်းရှိသူဆီကို နှစ်ခါထက်မကလာတယ်” ဆိုတာကို သိလာတာ။
လူငယ်လူလွတ်တွေနဲ့အတူ အခွင့်အရေးတွေကို အပြိုင်အဆိုင်လိုက်ယူလို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ်ရောက်နေပြီဆိုရင်၊ အဓိကလုပ်သင့်တာကတော့ အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်ဆီလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်စောင့်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းအစစ်အမှန်ကိုသိဖို့၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက် နှစ်မျိုးစလုံးကိုသေချာသိဖို့၊ ကိုယ်ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုဖြည့်ထားဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဦးတည်ချက်/ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ ဆိုတာကိုသေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ်ဟာ Finance အလုပ်ကိုလုပ်ရတာကြိုက်တယ်၊ တစ်ချိန်မှာ CFO တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ၊ ဘာတွေထပ်ဖြည့်ဖို့လိုလဲ? သင်တန်းတက်ဖို့လိုတာတွေရှိသလို၊ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရော ဘာတွေလိုသေးလဲ။ ပြီးတော့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်လဲ? ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်လား၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလား? ဒါတွေကိုသိထားရင် လိုအပ်တာတွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်သွားခြင်းအားဖြင့် လမ်းတဝက်မှာ ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုလည်း ခဏရပ်တန့်နေလို့ရတယ်။ အချိန်အခါသင့်ပြီဆိုရင် စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ တကယ်တန်းတော့ နောက်ကျတယ်၊မကျဘူးဆိုတာ ကိုယ်ကသတ်မှတ်တာပါ။ လူတွေဟာ အချိန်အပိုင်အခြားနဲ့ အရှည်အလျားမတူညီတဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနေကြတယ် ဆိုတာကိုတကယ်သိရင် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုယ် ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်ဖို့ကိုပဲ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။
တကယ်တန်းတော့ အခွင့်အရေးဆိုတာ လူမှန်၊နေရာမှန်မှာရှိနေရင် ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးတော့ ရောက်လာတတ်တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရချင်ရင် အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကို တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးကြိုးစားထားဖို့လိုတယ်။ မိခင်တွေအထူးသဖြင့်ပါ၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သူဟာ သူများနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတာ သင်တန်းတက်ရုံနဲ့ရတဲ့ အရည်အချင်းမျိုးမဟုတ်တာကြောင့် မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူပြီး၊ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်။
စာဖတ်သူတွေရော.. အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကစပြီး ဘာလုပ်မလဲ?
Illustration by Perri Elise Tomkiewicz.
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဘယ်လိုဆင်နွှဲမလဲ?
Career Outlook Careers in the Digital Economy for women(3)
Career-loving Women (5)
Our Writers (2)
Upcoming Live Webinars (4)
Women Entrepreneurship (5)
Work-life Integration (5)
Facebook Page Manager ဆိုတာ …
Content Writer ဆိုတာ …
အသက်သုံးဆယ်ကျော်သွားပြီမို့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားဖို့ သိပ်နောက်ကျသွားပြီလား?
Career ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်
2 mins read |
5 minutes read |
3 mins read |
"Life shrinks or expands in proportion to one's courage." __ Anais Nin
How She Built It
Copyright © 2021, How She Did It. All rights reserved.